Umbiko wokufinyeleleka | Vakashela uHultsfred
umphetho » Umbiko wokufinyeleleka
Umasipala waseHultsfred ungemuva kwale webhusayithi. Sifuna abantu abaningi ngangokunokwenzeka bakwazi ukusebenzisa iwebhusayithi. Lo mbhalo uchaza ukuthi i-hultsfred.se ithobela kanjani umthetho wokufinyeleleka kwinsizakalo yomphakathi yedijithali, noma yiziphi izinkinga zokufinyeleleka ezaziwayo nokuthi ungakubika kanjani ukushiyeka ukuze sikwazi ukukulungisa.
Ukuntuleka kokutholakala ku-vakashultsfred.se
Njengamanje, siyazi ukuthi asiphumelelanga ukuhlangabezana nayo yonke imigomo ye-WCAG kula maphuzu alandelayo, phakathi kokunye.
Kunemibhalo ye-pdf kuwebhusayithi engatholakali. Amanye amafayela e-pdf, ikakhulukazi amadala, akule webhusayithi yimibhalo efundwayo engafundeki njengoba isuselwa kumadokhumende angagciniwe. Asinalo ithuba elingokoqobo lokulungisa lokhu.
Izingxenye zewebhusayithi azihlangabezani nezidingo maqondana, ngokwesibonelo, ukungafani nokufometha.
Ezinye izithombe esizeni azinawo umbhalo we-alt.
Amatafula amaningi kuwebhusayithi awanazo izincazelo zethebula
Kunezinsiza namafomu angahlangabezani nemigomo yokufinyeleleka.
Siqale umsebenzi ohlelekile wokuxazulula amaphutha okufinyeleleka nokuqeqesha abahleli bethu bewebhu.
Xhumana nathi uma uhlangabezana nezingqinamba
Sihlala silwela ukuthuthukisa ukutholakala kwewebhusayithi. Uma uthola izinkinga ezingachazwanga kuleli khasi, noma uma ukholwa ukuthi asihlangabezani nezimfuneko zomthetho, sazise ukuze sazi ukuthi inkinga ikhona. Ungaxhumana nendawo yethu yokuxhumana ku:
Ucingo: 0495-24 00 00
Thinta isiphathimandla sokuphatha
Isiphathimandla sokuphathwa kwedijithali sinomsebenzi wokwengamela umthetho wokutholakala kwezinsizakalo zomphakathi ezidijithali. Uma unganelisekile ngendlela esiyiphatha ngayo imibono yakho, ungaxhumana ne-Digital Administration Authority bese uyayibika.
Sivivinye kanjani isiza
Senze ukuzihlola kwangaphakathi kwe-hultsfred.se. Ukuhlolwa kwakamuva kwenziwa ngomhlaka 20 Agasti 2020.
Umbiko wagcina ukuvuselelwa ngoSepthemba 8, 2020.
Imininingwane yobuchwepheshe ngokutholakala kwewebhusayithi
Le webhusayithi ithobelana ngokwengxenye nomthetho iDigital Public Service Accessibility Act, ngenxa yamaphutha achazwe ngenhla.